ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲသို့ ပိုလန်သမ္မတ တက်ရောက်မည် - Xinhua News Agency
ပေကျင်း ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ပိုလန်နိုင်ငံ အားကစားသမားများကို အားပေးသည့် အနေဖြင့် ၂၀၂၂ ပေကျင်း‌ ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အားကစားပွဲတော် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ပိုလန်သမ္မတ Andrzej Duda ပါ၀င်တက်ရောက်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်းသိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ကလည်း ဒူဒါသည် ပရဟိတအလှူတစ်ခုအနေဖြင့် Zakopane မြို့ တွင် ကျင်းပသည့် ၁၂နာရီကြာ ဆလာလွန်မာရသွန် နှင်းလျှောစီးပြိုင်ပွဲတွင် ပါ၀င်ကစားပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အစောပိုင်းရက်အနည်းငယ်တုန်းက သူသည် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရအပြီး ကွာရန်တင်းနေရမည့် ရက် ပြည့်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ဖလား အမြင့်ခုန်လျှောစီးပြိုင်ပွဲကိုလည်း Zakopane မြို့တွင် ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်က ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အမြင့်ခုန် နှင်းလျှောစီးခြင်းသည် ပိုလန်နိုင်ငံတွင် အကျော်ကြားဆုံး ဆောင်းရာသီ အားကစားနည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ပိုလန်နိုင်ငံသားများသည် ပေကျင်းအားကစားပွဲတွင် ‌ဆုတံဆိပ်များရရန် အကြီးအကျယ် မျှော်လင့်ထားသည်။(Xinhua)
GLOBALink | Poland’s president to attend Beijing Winter Olympics
Poland’s President Andrzej Duda plans to take part in the opening ceremony of the Beijing 2022 Olympic Winter Games to support Polish athletes.
Last Sunday, Duda took part in the charity alpine skiing competition “12H Slalom Marathon Zakopane 2022.” A few days earlier, he ended his quarantine afterasecond coronavirus infection.
The ski jumping World Cup competition was also held last weekend in Zakopane.
Ski jumping is the most popular winter sport in Poland and the Poles’ greatest hope for medals during the Beijing Games.